UMOSES: YAYINGUBANI? FONELA, UHAMBO NOKUNINZI OKUNGAKUMBI
Kule posi, malunga nokukhulu Moisés, umfundi uya kuba nethuba lokwazi kweli nqaku ukuba ngubani lo mprofeti webhayibhile, nako konke awayenako ukukunyamezela kuhambo lweentsuku ezingama-40. Qhubeka ufunda le posi, ukuze ungaphoswa lulwazi olubalulekileyo ngaye kunye nemisebenzi uThixo ayiphathise lo mprofeti.
1 Wayengubani uMoses?
1.2 Ukufa kwakhe
2 Ubizo lukaMoses
2.1 Ukubuyela kukaMoses eYiputa
2.2 Ukuwela uLwandle oluBomvu
2.3 Kwintaba yesinai
Moisés Wazalelwa eGoshen, ummandla wase-Egypt yakudala, amaYuda ahlala eYiputa ayengamakhoboka kaFaro. Kwiintsuku ngaphambi kokuzalwa kukaMoses, uFaro wawayalela ngokungqongqo amajoni akhe ukuba abulale onke amakhwenkwe angamaHebhere.
Umama ka Moisés Ukugcina ubomi bonyana wakhe, uyifaka ngaphakathi kwebhasikithi, eyiphosa emanzini omNayile, umsitho owabonwa ngudade wabo uMiriam, oku kwasindiswa yintombi kaFaro, eyamkhulisa njengo ukuba ibingunyana wakhe.
Igama lomprofeti, ngolwimi lwase-Yiphutha nolwesiHebhere lithetha "ukuhanjiswa ngamanzi" okanye "ukusindiswa ngamanzi." Moisés Ungomnye wabalinganiswa beBhayibhile abasondeleyo kubukho kunye nokulunga kukaThixo.
Kuthiwa ukuba ubomi bakhe babuphakathi kwenkulungwane ye-XNUMX BC kunye ne-XNUMXth century BC, kwaye yonke into yobukho bakhe yinto yokholo. Njengoko kubonisiwe kwiTestamente eNdala, ubomi Moisés Kuyachazwa kwiincwadi ezine zokugqibela ze-Eksodus, iLevitikus, iNumeri kunye neDuteronomi, kunye nakwizibhalo ezingcwele ezibizwa ngegama amaxesha amaninzi.
Akukho lwazi lungako malunga nobuntwana bakhe, nangona kunjalo, xa wayemdala, Moisés wabulala umYiputa owayephethe kakubi umHebhere. Ngenxa yesi sizathu, kwafuneka aye kwindawo eyaziwa ngokuba yiMidiyan, apho watshata khona noSephora kwaye bakhulelwa unyana ababizwa ngokuba nguGerson.
Kule ndawo wenza imisebenzi njengomalusi, ngenye imini eseNtabeni yeHorebhe, ndicinga ngokhula lusongelwe ngomlilo kwaye aluzange lutshiswe, yayisisimntwiso sikaThixo, njengoko kungqinwa kwiEksodus 3: 6:
NdinguThixo wabo ooyihlo. NdinguThixo ka-Abraham, uIsake, noYakobi ”.
Ilizwi lamyalela ukuba aye eYiputa, abantu bakhe, bamse kwiLizwe Lesithembiso.
Ixesha elingaphezulu Moisés Wabuyela eYiphutha kwaye waqinisekisa amaSirayeli ngento eyenzekileyo, emva kokudibana kaninzi, phi Moisés Wenza imimangaliso ngemvume yobabalo lukaThixo ukuze acenge uFaro, nangona kunjalo, wala ukunika inkululeko kubantu abangamaHebhere.
Kubonakala kwiEksodus 7: 7 ukuba ngela xesha umprofeti wayeneminyaka engama-80 ubudala, xa wayezama ukuthetha noFaro, kulapho ke xa uThixo wathumela izibetho ezilishumi eYiphutha. Kuxa uFaro eyamkela ukuba amaHebhere arhoxe. Ngokufanayo, kwiEksodus 10:12 kubonakala ukuba abantu abangamaHebhere bahlala iminyaka engama-40 eYiputa.
Emva koko bahamba baya kuLwandle oluBomvu, uFaro ugqiba kwelokuba uza kuphinda awenze amakhoboka kwakhona, kwaye ke wakhangela, kulapho iNkosi ithi Moisés:
Yini na ukuba ubuze kum, undazise amaSirayeli? kwaye wena, phakamisa intonga yakho, wolule ingalo yakho wahlule ulwandle kubini, ukuze amaSirayeli awuwele lomile.
Emva kokuba amaJiphutha ekulungele ukuwela, uThixo waluvala ulwandle kwaye barhaxwa. AmaHebhere aqhubeka nohambo lwawo, kodwa kwabakho umzuzu apho baphulukana nokholo.
Nje ukuba bafike kumazantsi eNtaba yeSinayi, Moisés Ukuya phezulu ukuze athethe noThixo, wahlala naye kangangeentsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40, kwaye yayixa wayefumana amacwecwe elitye elingcwele apho iMithetho Elishumi yayiya kwenziwa khona.
Emva kohambo olude lweminyaka engama-40 entlango phantsi kolawulo lwe Moisés, apho bafumana ubunzima obukhulu njengeenyikima, izibetho, imbalela, indlala, imililo kunye nokulwa nabantu bakudala basePalestine, kwaye amaHebhere ekugqibeleni afika eKanana.
Emva kohambo olude kangangeminyaka engama-40, apho wayezula entlango, uThixo ebona isigcina-sifuba esineentliziyo zabantu bakhe, esalela ukungena kwawo onke amadoda emfazwe awayeneminyaka engaphezulu kwama-20 ubudala, kwilizwe lesithembiso, ngokufanayo Moisés.
UThixo wavumela Moisés Ngubani oza kulibona ngeso lengqondo iLizwe Lesithembiso, encotsheni yeNtaba yeHorebhe, aze emva kwalo mbono afe eneminyaka elikhulu elinamanci mabini, ukufa Wakhala ke umprofeti kwaye abantu bakhe bamlilela iintsuku ezimashumi mathathu nobusuku obungamashumi amathathu, kwaye ingcwaba lakhe alizange lifunyanwe.
AmaHebhere eso sizukulwana afela entlango eshiya amathambo abo ethe saa kuloo mmandla.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Iivesi zeBhayibhile ze14 zamaKatolika aselula.
Kungqinwa yimibhalo engcwele, ukuba Moisés Ngaxa lithile wathatha umhlambi wakhe waya eNtabeni yeHorebhe, apho wabona ityholo elalisitsha kwaye lingade litshe liphele, nje ukuba asondele ukuze abone ukuba nguThixo, okanye ingelosi ethunyelwe ivela kuThixo, wakhupha ilizwi kwityholo utyhile igama lakhe, eyona ntsingiselo Moisés.
Ngokwengxelo, uThixo waxela Moisés ukuba abuyele eYiputa ukuze akhulule abantu bakhe ababengamakhoboka. Moisés Uphendule wathi akayena mntu ukulungeleyo ukuwenza lo msebenzi, kuba esithi ungumthintitha.
Aphendule uThixo, ukuba amnike ukhuseleko kwaye amnike inkxaso, kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko.
Ukubuyela kukaMoses eYiputa
Inzuzo Moisés Uthobele wabuyela eYiphutha, wamkelwa nguAron, umntakwabo omkhulu, owalungiselela intlanganiso yokwazisa bonke abantu bakhe ngento abazakuyenza. Ekuqaleni, Moisés zange yamkelwe, nangona kunjalo, ubuzwilakhe babunamandla kakhulu, kwaye Moisés ubonakalisa imiqondiso ebantwini ukuba bamlandele njengomntu othunyelwe nguThixo.
Kuyabonakala kwizibhalo ezingcwele ukuba eyona nto inzima yayikukuqinisekisa uFaro ukuba avumele amaHebhere ukuba ahambe, kangangokuba zange bafumane mvume yokuhamba ade uThixo athumele izibetho ezilishumi kubantu base-Egypt.
Ezi zibetho zazilawula ukutshabalalisa yonke into, kodwa, eyona nto ibuhlungu kukuba ezi zinto zazingunobangela wokufa kwamazibulo abantu base-Egypt. Oku kuvelise ukoyikeka okukhulu phakathi kwamaYiputa, okwenza ukuba amaHebhere avunyelwe ukuba ahambe ayokwenza amadini kuThixo wabo.
Ngosuku lwesihlanu bemkile abakwaSirayeli eYiphutha, uFaro waya kufuna umkhosi omkhulu, wabafumana ngakuLwandle oluBomvu.
Babanjwa ngumkhosi wase-Egypt, amaHebhere kwaye baphelelwa lithemba, kodwa uThixo wawaphula amanzi olwandle Moisés, ukuze amaHebhere awele ngokukhuselekileyo, nje ukuba amaYiputa azame ukuwalandela, amanzi aqalisa ikhondo lawo kwaye amaYiputa atshona. Kumaxesha apho amaJuda akwazi ukubaleka kubukhoboka awayegcinwe kubo eYiphutha.
Ngelixa akule ndawo ingcwele, yaziwa njengeNtaba yeSinayi, uThixo uyamnika Moisés iMithetho elishumi yokuwela kwintlango yeSinayi. Inzuzo Moisés Uya encotsheni yentaba ayokufumana amacwecwe omnqophiso, apho ayegcinwa khona kangangeentsuku ezingama-40, uThixo wamnika amacwecwe amabini amatye abunjiwe ngomnwe wakhe, oku kungangqinwa kwiDuteronomi 9: 9-10. 31:18.
Kwitafile yoMthetho, iMithetho Elishumi yayiqulethwe, imithetho esisiseko ekufuneka izalisekisiwe ngokuchanekileyo ngabantu abangamaHebhere. Kanye nenani lemithetho emincinci ekufuneka ibonwe.
Kanye Moisés Uhla eNtabeni, ezokwazisa abantu bakhe, uyaqonda ukuba xa engekho wayithathile wayinyibilikisa yonke igolide ukwakha ithole legolide, isimntwiso sikathixo wase-Egypt u-Apis, ababezakumnika njengoThixo wabo.
Umprofeti uMoses wacaphuka waza waphosa amacwecwe omthetho kubantu bakhe, awathi aqhekeka, wabeka umlilo kumfanekiso wethole legolide elalakhiwe ngegolide yonke eyayinabantu.